गाउँ खाने कथा।। रोमान्चक नेपाली लोकसाहित्य S1E1
के छ सपना चपली गर्लको ? - बिनीता बराल
प्रियतमा सेरिज 1.0
🎬 भिडियो हेर्नुहोस् 👆 2013 December 29 #प्रियतमा बन्द नहोस् तिम्रो मुस्कान, भोगिरहन चाहन्छु निरन्तर यो चरमआनन्द ! December 30 #प्रियतमा तिम्रो चुम्बनको सम्मानमा १० दिनसम्म मुख नधुने निर्णय गरेको छु । December 31 # प्रियतमा , मेरो ओठको क्यानभासमा तिम्रो ओठको कुचीले आज बनाएको आकृति जीवनको मूलढोकैमा टाँगेर राख्नेछु । 2014 January2 # प्रियतमा ले भर्खरै सन्देश पठाइन् – तिमीसँग बिताएका हरेक पलको माया लागेर आउँछ । उत्तर के लेखुँ ? January3 # प्रियतमा , नयाँ बर्षदेखि सबै लत छोड्छु भनेको त , तिम्रो मायाको के सारो तल लागेको ? January4 # प्रियतमा को गाथमा आराम नहुँदा म कसरी निर्धक्क निदाउन सक्छु र ? January5 # प्रियतमा , तिमी बेखबर भएको पल म कति तड्पिन्छु , तिमीलाई थाहा छैन र ? January6 # प्रियतमा , यति सानो उकालोमै थाकें नभन न । तिमी र म यस्ता हजार उकाला उक्लिनु छ । पुग्नु छ शिखर र बनाउनु छ सारा शिखरलाई होचो । शिखरमा पनि त चल्नेछ हिमबतास । त्यति बेला एकातिरबाट एकातिर तिमीले छेक्नेछौ , अर्कोतिर म छेक्नेछु । त्यो शिखरमा निरन्तर उभिन सकेमात्रै
दलित विभेदः नदेखिने रक्तपात - आहुतिसँग संवाद
No matter what you do, there is no happiness - Pragati Rai
कसरी गयो हरिवंशको जागिर, कसरी बन्यो मह जोडी ?
© Kazuya Akimoto Art Museum एकैपटक मरेको होइन ऊ पटक–पटक, धेरैपटकमा बल्ल मरिसकेको हो तर, मरिसकेपछि पहिलो पटक थाहा पाउने व्यक्ति मै हुँ । पहिलोपटक मरेको थियो उसको हृदय जहाँ म बेरिएकी थिएँ कुनैबेला । उसको हृदयको चिसो लास आफ्नै हृदयको चिहानमा दफनाएर निस्किएकी थिएँ म त्यतिबेला अचिनारूका फूलमालाले भरिएको थियो उसको घाँटी । हृदयसँगै विस्तारै मर्यो उसको मस्तिष्क मैले पनि थाहा पाइनँ लामो समयसम्म थाहा पाउँदा फैलिसकेको थियो दुर्गन्ध त्यति बेलै हो मैले थाहा पाएको मष्तिस्कबाट निस्केको दुर्गन्ध निकै लामो–लामो समयसम्म निकै लामो–लामो दूरीसम्म फैलिँदोरहेछ सार्वजनिक चिहानमा गाडिसकेपछि मस्तिष्कको लास सोच्दै–सोच्दै लामो समयसम्म हिडिरहें ‘मस्तिष्क मर्नु खतरनाक रहेछ’ त्यतिबेला ऊ आफ्नै परिवार भेला गरेर भोज खाइरहेको थियो । यसरी नै मर्दै गएको थियो ऊ र, बल्ल मरिसकेको हो केहीबेरअघि । अघिसम्म भीडले घेरिएको थियो ऊ थिए त्यसमा उसलाई प्रेम गर्नेहरु रोइरहेका थिए अलाल्लिएर र, थिए घृणा गर्नेहरु पनि थिएनन् तिनका पनि आँखा ओभानो । तर भीडबाट टाढा मजस्तै नरूने झन् धेरै थिए कत
सजिलो छैन, तर साहस छ . सरिता साह
Anna Bocek, oil on canvas, 2014 यो त्यही टाउको हो हिजोसम्म बोकि हिँडेको तिम्रो प्रशंसाको भारी । यसमा लहलहाएको घना कपाल खुप मन पथ्र्यो तिमीलाई यसैभित्र सहलाउँथे तिम्रा औंला खोजिरहन्थे असीम आनन्द र, लाग्थ्यो तिमीलाई सियाँल दिन नै उम्रिएको रहेछ । यसैमा समेटिएको जोर आँखामा ऐना हेरेर तिमी काव्य नै लेखिदिन्थ्यौ र, लाग्थ्यो यिनको काम हो झुक्दै–लजाउँदै हेर्नु तिमीलाई । ओठ र यसमा फैलिने मुस्कान अहा ! तिमी भन्थ्यौ– ‘मदिराको मात के कामको छ र यिनका अगाडि’ र, लाग्थ्यो गुलाबी गलैंचा हुन् यी मुस्कान छरेर ओछिइरहनुपर्छ तिम्रो लागि । प्रशंसाको भेलले नाकलाई पनि छोइजान्थ्यो मलाई भ्रम हुन्थ्यो नाकले नै मलाई म बनाएको हो र, लाग्थ्यो तिम्रो उपस्थितिको सुवास जाँच्नुबाहेक कामै पो के छ र यसको ? दुई कान, यिनका लोती ओहो ! कम प्रशंसा पाएनन् यिनका आकार र रंगले पनि र, लाग्थ्यो सुन्नु हो यिनको काम फगत् सुन्नु तिमीलाई । तर, जब थाल्यो यो टाउकोभित्रको मस्तिष्कले काम गर्न सब गडबड भयो गडबड ! जुरोमा समेटियो कपाल आँखा मानेनन् झुक्न र लजाउनमात्र सिधा हेर्न थाले तिम्रा आँखामा
Copyright © Kala Anuragi 2008-2020